Semalt: Sei & Sei Kuvhara Mutauro Spam MuGoogle Analytics Uye WordPress
Zvinotsamwisa zvikuru WordPress nevashandisi veGoogle kuwana spam reta uye maonero asina kunaka pamapeji avo ewebhu. Zvinotora nguva yakawanda kugadzira uye kushandura mafiritsi, uye vanhu vakawanda havatombozivi kuti vangadzivisa sei zvisingadadi migwagwa ye internet. Vakawanda vavo vane tsika yekubata nekutumira spam, sezvo ichi chimwe chezvinhu izvo zvakatambudza nzvimbo dzedu kwemwedzi.
Zvisinei, mumavhiki mashomanana apfuura, maitiro matsva uye mazano matsva akaiswa kuti abvise spam paIndaneti. Ivan Konovalov, nyanzvi inotungamira kubva Semalt , avakurukura navo munyaya ino. Tisati tatanga, ngatitaurirei zvishomanana pamusoro pemutauro spam.
Mharidzo yeLimi Spam
Kufuratira spam kunoreva kuparadza mukurumbira wako uye nzvimbo yako yekutsvaga mu tsvakurudzo yekutsvaga migumisiro. Mutauro spam, kune rumwe rutivi, inzira inoshandiswa nevatambi vekutsvaga mawebsite uye mapeji ehupfumi. Mimwe yemitauro yemutauro spam ndeyeRuddit, lifehack, mamaboardboard, uye thenextweb. Vanhu vanoita spammers vanowana nzvimbo dzavo dzakanyoreswa pamapuratifomu uye vanotumira maonero asina kunaka kune nzvimbo dzenyu mune nhamba huru. Vanoshuva kuparadza nzvimbo yako yekutarisa uye vanozviwana ivo pachavo zvakanaka paIndaneti.
Dzora Mutauro Spam
Chimwe chikonzero chikuru chekudzivirira mutauro spam ndechokuti izvi zvinogona kuparadza nzvimbo yako yekutsvaga mumatsva ekutsvakurudza..Kunyangwe iwe waita chichena chevha SEO uye upedze nguva yakawanda pakunyorera zvinyorwa zvako, mutauro spam unogona kukunyengera uye kuparadza zvose pasina nguva. Zvinogona kunge zvisingaiti kuti chero munhu azvipfeke muGoogle Analytics, uye ndicho chikonzero iwe uchifanira kuvabvisa kana kuvadzivirira nemaoko.
Kudzivirira mutauro spam muGoogle Analytics
Pane zvimwe zvingasarudzwa zvokuyeuka kana uchida kudzivisa mutauro spam muGoogle Analytics uye WordPress. Nzira iri nyore uye yakanakisisa ndeyokuisa WordPress plugin. Zvimwe, unogona kuedza zvinotevera:
# 1. Dhinda filters kuti uvhare mutauro spam
Chinhu chokutanga ndechokuvaka mafaira ekuvhara mutauro spam muGoogle Analytics. Iwe unogona kugadzira firiji yakawanda kubva pane zvaunoda uye unogona kusarura uye kugadzirisa deta. Iwe unogona kuvhiringidza kusungurudza kero dze IP kuti uone kuti nzvimbo yako yakachengeteka paIndaneti. Imwe nzira ndeyokugadzira zvinyorwa, zvinyorwa zvinyorwa, uye mavara emigwagwa, uye vanovhara zvose zvisingazivikanwi.
# 2. Shandisa zvikamu zvakakwirira
Unogona kuvhara nyore mutauro spam nekubatsira kwezvikamu zvakapfuura. Iyo imwe nzira inoshamisa yekubvisa spam muGoogle Analytics, asi sarudzo iyi inoshanda bedzi kana iwe une mamwe dhoroondo yemamiriro ekuchengetedza. Icho chisarudzo chakachengeteka kudarika kuumba mafikisi uye inobatsira kuchinja data muGoogle Analytics yako. Iwe unotofanira kuvhara zvinhu zvose nemamwe magwaro emashoko iwe usina kuvimba. Zvisinei, kana iwe wakanga uchishandisa zvinyoro zvakasiyana zvakasiyana pamakero eP, unofanirwa kuumba zvikamu zvevose zvavo muChikamu cheGoogle Analytics.
# 3. Shandisa zvitatu zvematongerwo enyika
Kudzivirira mutauro spam neatatu-mazita zvinogona. Izvozvo zvinogona kuva nguva inopedza, asi zvigumisiro zvinogara zvakanaka. Iwe unofanirwa kuvandudza mafaira ako uye zvikamu nguva dzose kuti uone kuti unogamuchira data yakanyatsonaka pane internet.